June 5, 2020 Mahad Jama 41
BOSASO(P-TIMES)- Puntland ayaa ciidamo gaysay gobolka Sool kadib markii maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ay ka socdeen dhaq dhaqaaqyo ay sameynayeen ciidamada Somaliland ee ku sugan degmada Tukaraq ee gobolka Sool.
Warar aan helayno ayaa sheegaya in xiisadahan ay ka dhasheen, iyadoo Somaliland ay doonayso inay ka hortagto in gobolka Sool ay saameyn ku yeeshaan dhaqdhaqyada siyaasadeed ee ay wadaan ururada ku tartamaya nidaamka xisbiyada badan ee Puntland.
Puntland waxay saldhig ciidan ka sameysatay oo ciiddamadaan geysay degmada Boocame ee gobolka Sool, halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyay xafiisyo siyaasadeed ay ka furanayeen ururada Puntland, waana arinta keentay inay Somaliland ka carooto.
Magaalada Bocame oo Garowe 60km uga beegan dhinaca galbeed ayaa ah magaalo ay wada sheegtaan Puntland iyo Somaliland, balse midnaba si caadi ah ugama shaqeeyo maamuladooda.
Bocame waxay aad ugu dhowdahay degmada Tukaraq oo sanadkii 2018 lagala wareegay gacanta Puntland.
Gaar ahaan PL iyo dadkeeda, iyo Guud Ahaan Beesha Daarood Waa Inay Difaacaan Oo Dagaal Lama Huraan Noqday Isu Diyaariyaan Siday Uga Hortagi Lahaayeen Beeshan Yar Ee Iidoor Oo Illaa 2007 kii Wadda Dhulballaarsiga… Waa In Aan Laga Weji Dadban Isimada SSC Ee Xoogaaga Shilmaadka Ah Loo Daadshay Iyo Kuwa Jirrida Ah Ee SNM Ku Tidhi Janaraallaad Tihiin, Waxaa Jira Koox Kale Ee Culumo Isku Sheegta Oo Leh Ganacsi Lana Shaqaysat SNM Ayagana Waa In Farta Lagu Fiiqo…Waxaa Khasab Ah In Beesha Daarood Si Wada Jira Uga Hortago Duullaanka Beeshan Yar Ee Iidoor Ee Cuqdada Qabta Ee Dhulballaarsiga ..
War ninyahow nimanku waa niman yarna waad leedahay, Daarood oo dhamina Buun baad ugu dhufataye xaalku waa sidee? Kkkkkk
War nimanku Harti baa ku filan kana badan, lakiin iyaga ayaa dhabarka iska tooganayee taasi xalkeeda raadi! Kkk
Marka hore anigu ma jecli in uu dagaal dhexmaro puntlaan iyo soomaalilaan.
Laakiin midbaan shaki kuma oo ah in maamulka hargeeysa ay xisaabtu ka qaldan tahay.Waxay uga qaldan tahay Isaaq kuma talo galin haddii ay soo qaadaan dagaal damboo gardaro in ay arintu tagayso Daarood iyo Isaaq.Isaaqna uma babac dhigi ka Daarood.Waayo isku tiro iyo isku awood iyo isku dhaqaalo midna ma aha.Waxaan ku talinayaa hargeysa ha joogiso daan daansiga gardaro oo dhulkaas nabad iyo is ammaan siin ha lagu wada daaqo.Dhulku ina ka wada badan ee yaan la raacin baaqa shaydaan.
Waar bal waalidan cas eega. Waar dagaalkan aad keligiin ogtihiin ee aan weligii dhicin waaxay? Waar Somaliland baa nagu soo doolaysa haysku khuukhinina, idinkoo qalalaase siyaasadeed oo idinka dhexeeya ku dhex xijaabaya!!!! Waar bahalka dagaal ha dalbanina, oo ka ducaysta hadaad caqli leediiin kuwiina waxaan malmaluuqaya!!!kkk kkk kkk
Waad ku saxsan tahay in dulmiga iyo duulaanka qaawan ee jabhadda SNM qummaati loo jabiyo laakiin hawshu sida aad u dhigtay u ma sahlana. Odayadaas Dhulbahante ee karaamadoodii sunuudda siistay ogoow reero dhan oo naftooda dhego iyo indho la’aan ugu huraya ayay ku tiirsan yihiin oo ay isku halleynayaan. Beesha Dhulbahante jeer ay iyadu hoggaan dhaqameedkeeda sugato cakirnaantan iyo ceebtan xal loo ma heli karo.
Puntland waxay dagaal gali kartaa marka ay 100% isku hubto in kuwa difaaca loo galayo ay iyagu rabaan oo u heellan yihiin. Inamada Harti ee ciidanka Puntland dhiiggooda in macna daro loo daadiyo ma habboona. Waxaa ka sii daran in ay walaalahooda ay islahaayeen u hiiliya iyagu dhabarka ka soo toogtaan iyo tol dhexdiisa isku jabay. Heer Daarood na lagu guuleysan waa oo Dhulbahantaha aan Puntland la maqashiin karin baa iska soo taagay waxii waanwaan ahaa ee muddo la waday.
Labo mid un buu xalku haatan ku jiraa:
1) Beesha Dhulbahante oo inta ay dhexdeeda ka heshiin doonto arrimaha deegaankeeda la iska laalo intii ay tolnimadu sii dhaawacmi lahayd.
2) In ay reeraha Dhulbahante qaabka ay u kala qaybsameen deegaanadooda ugu kala go’aan oo kuwa Puntlandnimadooda, tolnimada, iyo qarannimadooda Soomaaliya aaminsani ay issimadoodu bayaan idaacadaha uga caddeeyaan go’aankoodaas.
Waxii intaas ka baxsani waxay ku dambeyn doontaa sida wax u dhacayaan in ama ay beesha ka dhex qaraxdo ama se ay Hartiga ka dhex qaraxdo oo la isku ceeboobo. Siyaasaddu saansaan lagu saadaaliyo ayay leedahay oo calool adayg ayay u baahan tahay. Dhulbahantaha Puntlandnimada aaminsan markaasi waxii horumar ah ee hakadka ka galay deegaanadooda toos ha loga billaabo si cabashada waxqabad la’aanta Puntland ee ay cakirnaantu sababtay oo qiilka laga dhiganayo meesha ba uga baxdo.
Dablariday rash aan qarxin ayaad tahay.kkk Afkaaga & maskaxdaadu iskuma kalsoona. Waxaad qortay;”Beeshan Yar Ee Iidoor oo dhul balaadhsi wada”kkk kkk Yaa jaahil waad ku hafatay qoraalka waayo; Sidee beeshaa yar, dhulbalaadhsi u sameeyaan? Haday kaa yar-yihiin maxaad isga celin weyday? ma dhufaan baad tahay??? Xaqiiq Somaliland, Puntland duulaan kuma aha, xadkeeda ayay ilaaashanaysaa. Hadaad taas ku dhibayso dee soo iibso xiniinyo macmala oo dagaal soo qaad. Dar alaad u degi-ye!kkkkkkkkkk
HIDE AND SEEK POLITICS!
Waxay tani isoo xasiisisay ciyaar aannu ciyaari jirnay waagaannu yar-yarayn; ciyaarta waxa la oran jiray ‘dhuudh-dhuumasho’. Waxaa taa ka dhigan ciyaarta ay ciyaarayaan labadan jabhadood ee isku siyaasadda ah, waa ciyaartii CIYAALKA.
Haddaba, su’aasha muhiimka ahi waxa weeye, intee inle’eg bay SSDF & SNM waxan ay dhoob-dhoobeen sii jirin karaan? Qaranimadii Soomaaliyay la dagaalameen, oo ay haddana diiddan yihiin. Waxa shaydaan u qurxiyay in iyaga oo QABIIL ah ay QARAN noqdaan!!!!
Qarannimo ma rabo, islamarkaana aniga oo QABIIL ah baa raba in aan QARAN noqdo, caqliga fayoobi ma aqbali karo. Awal waxaannu ogayn SNM; haddana, waxay isqarisaba, waxaa si CAD ugu darsoontay SSDF.
Marka uu shaqsi masuul sheeganaya la soo fariisto shaashadaha oo uu af cad ku yiraahdo, “xildhibaanada federaalku ima metelaan”, saw iskama cadda in aan dawladnimo la rabin oo laga doorbiday reernimo? Labada jabhadoodna waxaa halis badan SSDF, waayo waa MUNAAFIQIIN dhinacna federaalkii sheeganaya dhinacna aan rabin in taako la gediyo.
Gunaanadkii, waa iska ciyaartii ciyaalka (hide & seek) cinwaanka aad soo qorteen ee ah in maamulada Hargaysa & Garoowe ay ciidamo isku daabulayaan ama ay isgaad-gaadayaan. Labaduba hal aragti bay ka qabaan dawlad Soomaaliyeed oo hana qaada, waayo ma rabaan in aan loogu yimaaddo DEKEDAHA & MADAARADA QARANKA SOOMAALIYEED ee ay ku habsadeen. Waxay marka ka doorbideen in ay kaabo qabiilo noqdaan, inteese inle’eg bay kaabo qabiilnimo sii socon kartaa haddii qarannimom la diiday? Inteese in le’eg bay beesha LIXAAD sidaa nagu sii eegan kadhaa?
@Tuugga Yoocada Ku Dhuumaaleysanaya,
Waddan dunida rasmi uga jira ayaa xuduudo iyo astaamaha dowliga lahaada. “Somaliland” ma aha wax rasmi dunida uga jira sida laga wada dheregsan yahay.
Haddaba “xuduudahan” aydun ku khafiifteen xagee bay ku yaallaan illayn dalku waa Soomaaliya oo dal gudahiisa na xuduudo caalami ahi kama jiri karaan ee?
Waad aragtaa baan filayaa waallida cass ee adiga kaa hadaajinaysa.
Boodhari- adigu OROMO af Soomaali barataa tahaye Soomaalida ka dhex bax arrimahooda!
SSDF & SNM waxay ahaayeen laba jabhadood oo xaq u dirira. Hadaan nahay Somalilanders, weligayo kuma cayno reer Puntland SSDF ayaa tihiin. Waayo SSDF oordoox AFWEYNE ayay la dagaala-mayeen. Mararka qaarkood iyagoo isku dhafan. Xitaa godoomiyihii SSDF ee ugu horeeyay wuxuu ahaa nin Isaaqa oo reer Berbere ah. Dib u akhri taariikhda!
Xoogii ciidamada SNM-na 1990 markii aan maamulkii uurdooxa AFWEYNE, orodkii uu Abuja ku galay, ayay hubka dhigtay SNM. Maxaa markaa SNM ugu hadaaqdaan? kkk kkk kkk
Dadka waashay anigu xaasha uma jawaabo!kkk kkk kkk
Wacadee in aad majnuun falan tahay. Sow adiga tobanka magacyood isugu jiijiibaya oo meesha ba camira marka lagugu raran yahay?
Kan meeshan maryaha ku tuuray waa un adiga.
Keli waa u ducaynayaa in ilaahay caqliqooda dib ugu soo celiyo!kkk
Caqli caruureed baa kaa hadaajiyay runtii oo taariikhda dalka ayaad si xun uga arradan tahay. SSDF waxay ka unkatay siyaasad xumadii uu curiyay dagaalkii qaboobaa ee Dowladdii Kacaanka dibindaabinayay. Rag dhan oo dalkooda naftooda u hurayay ayaa iyaga oo Addis Ababa qarka u saaran inta dib looga soo amray kurka laga wada jaray. Jeneraalladii SSDF iskugu biiray taas ayay si xun uga dhiidhiiyeen oo ay ka gadoodeen. Markii dambe na maatadoodii ayaa ceelasha laga suumeeyay oo wax horumar ah laga cunaqabateeyay. Damiirkoodu u ma saamixin in ay u dulqaataan.
Qarankeenii waxaa ciidda afka u daray jabhadaha USC iyo SNM. SSDF iyo SPM shacabkoodi xaq darada isir neceybka loogu xasuuqayay ayay isu taageen oo mooryaantii huwanta ahayd ka dhiciyeen. Sharaf iyo geesinimo ayay ku ahayd abid lagu faani doono oo maanta loo aayay. Waxii ka dambeeyay SSDF ayaa beesha caalamka kala soo shaqeysay sidii qarannimada Soomaaliya loo badbaadin lahaa oo dib loogu soo nooleyn lahaa naf iyo maal ba way dul dhigeen. Mooryaantii Xamar iyo Koonfur xaaraanta ku haysatay ee dowladnimada dalka uga dhaarisay SSDF baa ka safeysay oo dowladnimada soo celisay iyada oo uu Mareykanku xataa hawshaas ku guul darreystay.
SSDF baa dalka ka saartay cakirnaantii “ku-meel-gaarka” ee laga dhammaan waayay. SSDF baa xal macquulsan oo federaalism ah u soo hindistay oo ay beesha caalamku ugu mahadisay. SSDF al’aana ayay dagalkeeda duulaanka lagu yahay iyo dadkeeda ba difaac adag ugu jirtaa. Ama kuray yar baad tahay ee “hide and seek” iska sii dheel, haddii kale orod oo taariikhda dalka soo baro inta aad dameer sidiisa iska dinaahayso.
24hrs halkan baad dhex yuruurtaa kana dhex ooydaa oo ka calaacashaa waar wuxu miyuu nin Ahayn,waar ninkan muxuu Iidoor ku Sameeyey waa yaaba. Marwalb oo halkan soo booqdo waa kii oo baroor la dhex jooga golaha,waar Daaroodkan aad ku xiiqdey kuna waalatay aan waxba kuu qaban karin Ha ceebeyn. Odey baa tahay cuqdadad iyo malixi uurka ka buuxdo talo hadaad dooneyso Dhaqtarka tag intey goori goor tahay.
Ahmed farax says:
1. Dagaalki tukaraq dhanka puntland wuxuu ka ahaa dagaal siyasadaysan wayo sarakisha ugu saraysa puntland madaxwayne ayay u sharaxnayen, marka sidee ninka ad rabto inad kursigisa la waregto ugu ogolan karta inu libta qaato? 2. Somaliland tukaraq dagal kulamaysan wareegin oo si an dhiig kudadan ayay kuso gashay taasna dood ayaa lagakeni karaa? O waxa la orankara dad gaas ku xumaynayay oo rabay inusan solaban aya mamulka hargeysa kalashaqeyay, 3. Somaliland kadib marki lofududeyay inad tukaraq so gasho waxay qoteen godad wawayn iyo boholo waxayna dagaal lagaleen qayb puntland kamid ah oo badankod mudug kayimid oo marba dhinac la riixaayay 4. Maxad umalayn lahayd harti iska daaye majeerteena iska daaye maxamud saleban oo daacad dagaalku kayahay bilaa siyasad bilaa hagardaamo
Cimri intaan noolaa noocan oo kale ma arag waan ku dhaaranayaa inaad in badan iga weyn tahay laakiin ninyow caqli meesha kuma haysid.waar ragu wuu isdilaa kala adkaadaa ama kala joogaa oo fuleygu wuu bakhbakhleeyaa meelahaa ka faanaa sida gabadh yar oo foodley ah ama sidaada oo kale bal waakaasaa maxaad yeeli kartaa somaliland Garoowe dusheeda ayay joogtaaye. Mid aan kuugu dhaarto somaliland never go back ilaa ay xadka soo xidho waxkasta sameeya Abadan halayku baa’bo, habeen xalay tegey inaad Somaliland aad kala goysaan Oo harti ka goysaan arinkaas balan iyo wacad baa ka yaal waxba yaan lagu daaline. Ama diid ama yeel thats the hard trues Eri Boowe
Anigu cay kaalmaysan maayo, laakiin labba arrin oo aad ka dhaqaajisay baan ka hadlayaa; waa abuuritaankii SSDF iyo hindisaadda nidaamka federaalka.
Cudur laguma daaweeyo isla cudurkii. Waxaan ka wadaa, haddii sidaad sheegtay, saraakiishii SSDF hoggaaminaysay ay ka gadoodeen qorshe xumadii dagaalka looga soo baxay iyo saraakiil la laayay, maxay ITOOBIYADII lala dagaalamayey ee CADAWGA ahayd ay jaalka ula noqdeen oo ay saldhiga uga dhigteen?! Halkaa QAA’IN WADDANIMO maku haysaa (high treason case)?
Nidaamka federaalka ee aad macquulka ku sheegatay, sida aan xog ogaalka u ahay, waxaa nagu soo dhextuuray nimankii TIGREEGA ahaa ee Itoobiya, waxa ayna adeegfsadeen madaxdii SSDF; taariikhdu iyadaa dib isu qorta. Danta ay Itoobiya ka lahaydna waxa ay ahayd in ayna Soomaaliyi weligood isu iman, oo fikirka QARANIMADUBA uu meesha ka baxo, si aan Itoobiya dhulba loogu sheegan.
Maantana dhaxalkeedii waa haynaa, in dadkiiba ay u arkaan maamul beeleedyadooda DAWLADO ka madaxbannaan dawladda dhexe. Taa waxaaba ka siidaran, in SSDF aysanba oggolayn nidaamkii ay Itoobiyaanku us oo dhiibeen. Waxa ay hadda rabaan GOONI-GOOSAD ama wax ay ugu yeereen CO_FEDERATION! Ka dar oo dibi dhal. OROMO af Soomaali baratay baad tahaye ciyaarta meesha nooga daa.
Waxaad ku hadaaqday “anigu caay kaalmeysan maayo”. Oo marka aad Oromo igu tilmaantay ma caay baad ii reebatay? Dadkiinan nasaqan miyaydaan ismaqlahayn waa yaabee?
Adigu su’aalaha meeshan kuu yaalla waxay yihiin; teer iyo markii ay SSDF Xamar xoreysay oo intaas oo dowladood la soo dhistay maxay Xamar u xasili wayday? Yay se ka xasili la’dahay? Ma SSDF baa Xamar joogta mise ka talisa? Ma SSDF baa shabaab ah oo shacabkiina sida waxshinimada leh Xamar ugu xasuuqa? Mise Itoobiyaan baa inta ay ismiidaamiyaan isku kiin dhex qarxiya?
Hadal nin garaad leh macsharka la soo xaadir oo intaas ka soo jawaab. Reer SSDF dagalkooda ayay isku ekeeyeen oo ay weli na ku amaan gali la’yihiin oo noocaaga oo kale ayaa meel kasta been iyo barabagaan naxli iyo isir neceyb ku saleysan la taagan.
In af iyo addin ba la iska kiin dhicinayo idinkana ku talagala.
Kollay mooryaan USC ah baad u hadal egtahay ee middanna iga hoo. Waxaad ku hadaaqday oo kale:
“SSDF…Waxa ay hadda rabaan GOONI-GOOSAD ama wax ay ugu yeereen CO_FEDERATION”.
Soomaaliya oo burbursan ayay reer SSDF xor ahaayeen oo geyigooda ku nabdoonaayeen. Nin aabbe dhalay oo ku soo dhiirrada 30kaas sanadood lama hayo. Kii isku dayay na nacasnimadiisa waa la eedsiiyay sida aad ogtahay ba. Gobta uu Rabbi maanta Soomaaliya ku badbaadiyay oo heerkaas ku soo simay waa reer SSDF oo waa macruuf. Haddii ay “gooni-isu-taag” maaggan yihiin waa hore ayay goosan lahaayeen oo aanay cidi wax ka qaban karteen. Aqoon dheer baa weli kuugu laaban wallee. Iska hadloow ina igarre.
Geeska Afrika waxa ka socda waxa sabab u ah ducufnimada Daarood. Bal eeg waxa ka socda mandhiqadda :
1-Dhulkii Daarood Sool, Sanaag iyo Cayn waxaa
xoog iyo xeelad kula wareegey reer yar Isaaq ah.
2-Beesha yar Isaaq waxay kale ku guuleysatey in ay colaad dhex dhigto Harti dhexdiisa iyo Dhulbahante dhexdiisa
3-Majeerteyn waxay noqdeyn dad haba yaraatee wax caqli ah aanan lahayn, meel uu cawdow ka jira iyo meel kale aan kala aqoonin, siyaasaddiina ku fashilmey.
3-Maamulka Galmudug Hawiye ku dhan yahay xiriir toos ah laleh Hargeysa hadafkooda koowaad wuxuu yahay sidey gacanta ugu dhigigaan dhammaan Gobolka Mudug waxayna Galkacayo ku dileyn 300 waxgaradkii Daarood ah. Sideey Dhuusamareeb ula wareegeyn si la mid ah ayeey Galkacayo ugu haminayaan.
4-Muqdisho oo aheed caasimada Soomaaliya .. Shan iyo tobankii sano ugu dambeeyey wixii hanti ah magac soomaaliyeed lagu soo qaadey waxaa Hawiye caasimaddii soomaaliya looga dhigey magaalo Hawiye.. dadka Daaroodka ah jooga Xamar waxay la heestayoaal u yihiin Hawiye.
5-Saddexda gobol Jubbaland oo dadka dega 80% yihiin Daarood waxay la imaanla’yihiin siyaasad mideysan waxayna u badan tahay in ay gacantooda ka baxeyso.
5-Dawladda Degaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya waxaa ka socda kacdoon lagula dagaalamayo Daaroodka.
6-NFD beelaha Garre, Dagoodiye, Ajuuraan iyo Murinle waxay dagaal daran kula jiraan Ogaadeen iyo Daaroodka kale ee halkaas degan.
Siyaasiyiinta Irir labadii sanaba waxay qabsadaan Shir oo inta badan ka dhaca Jabuuti waxayna iska xog wareestaan arrimooda.
Sannadkii 2019 kii waxaa shirkaas ku soo biirtey ganacsato iyo siyaasiyiin ka yimid NFD.
Afnooli wuu iska hadlaa. SSDF sabab kasta oo ay u abuurantey aakhirkii wey fashilantay. Waa kuwii Afweyne sasabtey ee soo Xero gashadey. Wax buurana iyaga uma qaban.
Cabdillahi Yuusuf wuxuu ahaa mucangag ka hinaasey Afweyne. Isaga iyo kan argagixisada ah ee Muqdisho xabsi guri daa’inka ugu jira. Labaduba iney Madaxweyne mar uun noqdaan ayuu hamigoodu ahaa. C/Laahi Yuusufna Puntland wuxuu u sameystay iney salaan uu Villa Wardhiigley ku tago u noqoto. Maalintuu fursadaas heleyna Puntland xaabo uu gurigaas ku qiijisyo ayuu ka dhigtey. Sheekh Sheydaankuna Maxkamdo Islaamiya iyo Alshabaab ayuu salaan ka dhigo is yidhi oo wuu fashilmey.
USC inkastooy Afweyne Nala ridey, iyagana waxa fashiliyey siyaasad la’aan.
SNM ayaa hadafkeedii si wacan u gaadhey. Iskamay dhisneyn uune, waxey laheyd qorahe u degen. Iyada oo jabhad ah ayay hadana Dawlad aheyd. Waxey laheyd Maamul Guud. Garab Siyaasi ah iyo Garab Milatari ah. Garab kastaa hawshiisa ayuu watey. Garabka siyaasigu wuxuu lahaa gole Maamul iyo mid dhexe. Waxa kaloo weheliyay Gole Guurti ah oo ahaa marjac at Jabhadii SNM iyo Somalilandba ku caano maashay.
Kolkay wadanka qabsateyna, Waxa maamulkii loo dhiibey Labo sanadood. Madaxweynihii waxa noqdey hogaankii ugu danbeeyay Jabhada. Golihii Dhexe wuxuu isku badalay Golihii Wakiilada. Guurtidiina Golehoodii ayay sii hayeen. Garabkii Milatariguna aakhirkii waxa laga dhigay Ciidamo Rasmi ah. Sababtaas ayaana cadeyneysa iney SNM aheyd Jabhad hadafkeedii ku guuleysatay. Taariikhda ayaa qori doonta iney SNM xaga Sare kaga jirto janhadihii dunida soo maray kuwooda ugu wanaagsan.
Labo sanadood ayay xilkii shacabka ugu wareejisay siday balantu aheyd. Ragii naf iyo maalba u hureyna intey qoryihii dhigeen ayay safka dhankkooda kasoo galeen Illaa ay xukunka u igmadaan shacabkoodii oo ay u codeeyaan.
Faan iyo faataabakh taariikh cusub ma qorto. Si kastood uga sineyso taariikhda istidhaa dib u qori kari meysid. SSDF waxey aheyd Jabhad siqiirtey. SNMna mid guulo waaweyn gaadhey oo badhaadhay.
Puntland Dastuurkeeda waxey ku xardhatay in hadii Federaal ay iyagu qoraan aanu ka hanoqaadin Soomaaliya iney ka go’i karaan. In inta ay Soomaaliya cagaheeda isku taageyso ay ka Madax banaanaadaan Soomaaliya. Labadaas qodob ayaa ugu muhiimsan waxey malmaluuqdeen oo dhan. Waxey kaloo xariiqdeen xuduud waali ah oo isir ku saleysana oonan sinaba unsuurto galeyn. Taasina dabar ayay ku noqotey.
Deni cishadii dhoweyd ee uu shirka wada tashiga iclaamiyay waxey aheyd uun hiyi kac uu rabey inuu gooni isku taag ku dhawaaqo ee caqabadihii ayaa ka tan batay. Hamigaasi weli wuu kujiraa ee dib buu u dhigtey.
Cisho aan fogeyna waxaynu filanaa waa iyagoo go’id iyo wax la caano maala ku dhawaaqa.
SSDF guulaha ugu waaweyn ee u soo hoyday waxaa weeyaan in ay:
1. Jiritaanka qarannimada Soomaaliya badbaadisay oo dib u soo nooleysay.
2. Dhagartiinii SNM ee cunsurnimada iyo isir neceybka ku saleysnayd biyo qabooow ku shubtay.
3. Qaddiyaddiinii gooni-u-goosadka ahayd dhiciseysay.
4. Beesha Caalamka idin tustay oo idin ku dirtay.
5. Mooryaantii USC iyo qaddiyaddoodii ayay cardaadiqaha ka dhigtay oo Cadaado ku soo koobtay.
Waxaas ayaa guulo rasmi ah loo yaqaannaa (by the standard of International Politics).
Guulaha ay SNM gaadhay waa kuwee? Sow idinka 30 sanadood ka dib weli Hargeysa barriiqan? Dal go’an ma aydan noqonin oo xataa maamul goboleed rasmi loo aqoonsan yahay ma tihidin. Dhowrkaa dabadhilifyada idiin ah ee Hartiga ka dhashay waxba idiin ma soo kordhin karaan waayo waa kuwo nolosha ka dhacsan oo intaas daandaan ah. Isaaqii ayaa xataa ku kala baxay qaddiyaddaas oo ku kala dhintay (Garxejis mee?).
Xaqiiqadan iga hoo; haddii ay xataa Dhulbahantaha iyo Warsangaliga oo duuduuban Puntland iskaga baxaan in ay adiga kula goostaan waa calaacashaas oo ay timo ka soo baxeen. Marka ay ugu sokeyso iyaga ayaa maamul goboleed u gaar ah dhisanaya. “Somaliland” ka samir oo ka daneyso ku daysay ee.
Hillaac waxaad u egtahay NIN xanuunsan cudurka ku haysa Waa naceyb MAJEERTEEN waadna u dhiman
Sababta aad u leedahay Waa munaafaqiin Waa uun naceyb qabil.
Hillaac car II sheeg qabiilkaada adigoon sheeganeyn qabiil baan ah.
Meeshaan aarkoo qura baa ku faagtey waana suldan @Boodhari kkkkk kkkkk. Ar shiish kululaa kkkkk kkkkk. Wax bujuu iyo bajaa ka daba dhaha la waa kkkk.
Boodhari boowe isha baxarka isha baxarka. Aaway kuwii ugu booteenayey mj ma ahid iyo reer puntlaan ma ahid? Ameey ka maseereen kkkk kkkkkk
Puntland waa shoode Somaliland oo imika anaga shoodhayagii yaraa noo faanin kari meysid.
Dhulbahante iyo Warsangelina naga goyn kari meyso. Awalkii horeba buffer zone ayay u ahaayeen oo anaga ayay iska kaaya xijineysay.
Idina waa idiin faanka anana waa noo runta.
Laba mid baad tahay:
1- Kuwii xaaraanta kacaan kusheegga lagu soo koriyay oo aqbali la’a in xaaraantaas waqtigeedii dhammaaday
2- Inaad tahay kuwa aan waxbaran oo haddana afarta mad-haboodba ka jawaaba.
Kuwa Afweyne hoggaaminayay ayagaa dumiyay qarankii soomaaliyeed ka dib markay xaaraan ku boobeen qaranimadii ummadda soomaaliyeed ka dhaxaysay. Marka tuug wax dhacay oo weliba qaranimo dhan dhacay aniga dowlad iiguma sheegi kartid.
Midda kale aan runta kuu sheegee waxaad tahay ku ku xanuunka qabyaaladda iyo beel nacaybku madax maray oo aan cidna waxba kusoo kordhinayn.
In SSDF sax ahayd waxaa markhaati ka ah in wixii ay ka dagaalamayeen oo ahayd in qaranka soomaaliyeed aan xoog iyo askarinimo lagu wadi karin midhihiisii maantaad haysaa!! waxay arkayeen wax kuwa calooshood la ciyaarka ah ee aad kamidtahay aanay fahmi karin. YOU JUST CAN LEAD A COUNTRY IF THE ONLY QUALIFICATION OR TOOL YOU HAVE IS A GUN! and that’s all Barre and his junta had.
On the federalism question, even though it was agreed by the majority of the Somali stakeholders, SSDF is glad to own it, because we are born leaders, not followers like you. You are typical somali fadhi ku dirir, you don’t bring any useful solution on the Somali problem on the table but you keep complaining like a little girl. Ummadu ama waa talo keen ama waa talo raac. Reer Puntland waxaa lagu yaqaan inay talada keenaan haddii mid fiican la keenana ay raacaan taasina waxay ku timaaddaa isku kalsoonida dadka mandiqaddaa kasoo jeeda.
Marka kuwa xasadka iyo cuqdadu ka buuxdo ee aad ka mid tahay waxaan odhanlahaa adeer bax oo sakiin liq
puntland madoonayso in aydagal lagasho somaliland waayo somaliland waxaa kadokeeya dadkii deeganka udhashay oo aan doonayn dagal somaliland lalagalo dadka deegaankaas in lascaanood laqabto waxay kajecelyihin in Garowe laqabsado. wax ladagalsan isaaq oo kasojeeda deegankaas Ssc puntland ma arag ilahada
I left you with a reply on the other thread.
Ok let me add few words to this thread.
SSDF waxaa loo dhisay hal mawquuf. Kaaso ahaa badbaadada qaranimada umada somaaliyee. Khaladka kaliya ee SSDF sameysay waxuu ahaa aasaasidi SNM.
1. Xabashidu waxay calankeeda ka taagatey magaalooyinka xuduuda somaaliya. SSDF si kul ayay uga hortimid ficilkii xabashiduu ku kacay. Taaso kalftay in isku dhac xoogan dhex maro SSDF iyo xabashida
2. SNM waxay soo shaac bixisay sirteedii ahayd in ay Somalia kala goynayso.
Labadaas arimood ayaa kalifay in ay SSDF joojiso dagaalkii ay kula jidhey dowladii kacaanka waayo waxii awalba ku kalifay in ay kacaanka la dagaasho ayaa wax ka daran yimid. Qaranimadii iyo wadajirkii somaaliyeed ayaaba khatar weyn soo food saartay oo SNM ay xabashi kala safatay somaliweyn.
SNM waxay xabashida ku beer laxawsatay in SSDF IYO M.SIAD BARRE DAAROOD yihiin oo uusan SSDF daacad ka ahayn dagaalka lagula jiro Siad Barre. Taasoo keentay isku dhicii labad ee SSDF iyo xabashida dex mara oo lagu xiray Cabdullahii Yuusuf.
waxaa ka dambeyeey in Dagalyahanadii SSDF kusoo noqdaan wadankooda ayagoo aad uga caraysan khayaanadii Bucur Bacayr.
Magacaygu waa Kan kore
Waxaa 20 magac wata oo isagu isu jawaabaya o marba qolo caynaya waa khaniis Eeyduur. Waalida, fulaynimada iyo kalsooni xumada la weyni maxay tahay?
Khaniis Eeyduur xataa magac naageed buu wax kusoo qorayaa
SSDF ma samayn SNM,waxase jiray in Col.Cabdullaahi Yuusuf (AUN) qaabilay jabhadiisiina kusii daray askartii,saraakiishii SNM ee goostay inta madaxdii SNM Itoobiya u ogolaanaysay ogolaansho ay kusoo galaan dalkeeda,wadahadalna la gelayaan,waxadse hilaantay in Gudoomiye uu ka ahaa SSDF nin ISAAQ ah,waxa kale oo ka tirsanaa Alfannaan M.Mooge aun
SNM hadaf iyo qorshe cad ayay lahayd oo ahaa xoraynta,soo celinta sharafkii,karaamadii,dawladnimadii luntay ee Reer Somaliland,kana dul-qaadaan shacabkooda cabudhintii,tacadigii nidaamkii rajiimka ahaa,waana ka dhabeeyeen,halka SSDF markii horeba woxoodu hunguri iyo kursiga dalka ahaa,oo keligood aan sinaba ugu suurtowdeen inay ka tuuraan M.Siyaad,waana tii uu fashilmay Inqilaabkii ay abaabuleen saraakiishii Mj,Lana qabtay Cirro iyo kuwo kale lana dilay,Col.Cabdullaahina Kenya baxsad Ku galay isaga iyo Ina Abshr Haamaan,waxana u fududeeyay inay Itoobiya u gudbaan Col.Cawip oo ahaa safiirka Somaliya Nairobi u joogay,waana nin Isaaq ah,taa abaalkeeda ayuu C/llaahi yuusuf gudayay.
Macnaha SSDF muddo 8 sano ah ayay Ku qaadatay inay fahmaan waaqica jira iyo inaanay Ku habsaamin dawladnimo Somaliya oo degdeg loo helo,kadib shirkii Qaahira ee ay kasoo cadhoodeen saraakiishii SSDF,waxay go’aansadeen inay lama huraan tahay aasaasida maamul metela dadka dhulkaas,kuna daydaan Somaliland oo markiiba fulisay hadafkeedii,marka siyaasada curinteeda waxa idiinku macalin ah Somaliland.
Midda nasiib darada ahi waa sheegashada Puntland ee qaybo kamid ah Somaliland,waana mid keeni doonta dagaalo joogto ah hadaan caqligu shaqayn,Lana bad-baadin dhiiga dadkaa walaalaha ah ee dariska ah,waliba anigu PL ayaan odhan lahaa candhuufteeda dib hawga liqdo dhulkaa,hana joojiso xasarada ay sanadkiiba mar bilaabayso,kuna daandaansanayso SL.
Meesha wax baa ja dhacay!!!!
@@@ Caaqil Cabdiweli:
Wax badan oo aad sheegaytay waa sida aad u sheegtay.
SSDF waxaay ahayd Urur ku as aasanmay natiijadii ja dhalatay, isku daygi Afgembigii fashilmay ee uu Allaha u naxariistee hoggaaninayey,col. Cirro.
Runtuna waxaay ahayd, Siyaad Barre iyo Raggaasi waxaay ahaayeen, niman Kursi isku haaystey. Kaas oo kii ku fadhiyeyna uu difaacday, halka qolada kalena aay isku dayeen in aay ka kacsadaan, waaana rag caadadii oo wiil iyo aabbihii ayaay dhex martaa.
Laakiin runtu waxaay tahay. SSDF qasadkeedu ma ahayn, in aay ama Soomaaliya kala go’do ama aay Xabashi Qabsato.
C/llaahi Yuusuf oo ahaa nin uu Ilaah run u dhaliyey ayaase ka Qoomameeyey markii uu Madaxweynaha ahaa oo yiri, waxaan ahaa ninkii ugu horreeyey oo Kacaankii Xabbad ku rido. Laakiin haddii aan moodayo in aay Soomaaliya sidan ku dambeyn doonto, ma aanan sameeyeen wixii aan sameeyey. Tallaabo aad qaaday qalad ka dhashay oo aad ka shallaayso, waa qeyb kamid ah Hibo uu Ilaah ku siiyey!!
Hadalkaa C/dullahi micniisu ma ahayn Kacaankii in uu saxnaa ama wanaasanaa, laakiin wuxuu ku sifoobayaa Xadiiskii lahaa, LABO ARRIMOOD OO DHIBAATO WADA AH, tan ugu dhibka yar dooro! Oo meesha Soomaaliya aay ka dhacaday ayuu ka xumaaday.
Halka SNM aay lahayd hammi hooseeyo oo ah, in aay ka taliso deegaanka aay ka soo jeeday oo kali ah. Meesha uu USC hamigeedu ahaa, in aay wax boobaan iyo in aay Daarood laayaan. Kaas aanan isaguba isku aragti ahayn.
Usku soo wada duuboo, Jamhadahaasi waxaay ka sinnaayeen, in aay dabada la wada galeen, Xabashi oo ah QOOWMIYAD KIRITAAN XAG JIR ah oo aay Soomaalida oo Muslim ahi kala dhaxeeysay, colaad socotay ku dhowaad 1,000 sano.
Caaqil, maxaay wax kasta oo aad alliftaan, ugu dambeyn aay Daarood ugu daba geddoontaa?? Kkk
Daraawiish laga hor yimaado, Madaxweneyaal ama la dilo ama dadka lagu kiciyo, Jamhado sameyn la allifo, Federaal lakeeno oo aay hadda qaar Gobol iyo bar iyo Hal magaalo State ku sheegayaan! Kkkk
Jawaabta Saxda ahi waa Puntland waa damaaciyiin fiiro dheer laheyn. Hadh iyo habeen waa niman u taagan iney iyaga uuni wax xukumaan.
Wiirsiga ama quudhsigu raga jar ayuu ka tuuraa. Laakiinse, wey adag tahay qof aan fiiro dheereyni inuu arinkaas arko Illaa iyo uu Gabalku ku dumo. C/Laahi Yuusuf wuxuu baraarugay kolkii uu Gabalku ku dumey. Kursigaa indho iyo dhegoba qaadey’.
Anagu Hadaanu Reer Somaliland nahay Soomali oo dhan waanu jecel nahay. Sooryo iyo Samara bixin waad noogu kaalayi. Laakiinse doqoniimo Iga Waloon lanoogu soo gaban karin. Daandaansina warkiisaba daa.
Faankii dhoocilaha ayaa meesha lala yimi,SSDF hunguri uun baa waday Afweyne kursiga ka qaada keliya ayay ka ahayd,SSDF,cabdilaahi yusuf waa nimankii Xabashida Somaliya soo geliyey,markii danbana Afweyne hoosta kawada galay xoogaa luflufa la siiyey,laakiin hanka Snm wuu ka weynaa kana duwanaa jihaadkuna run ayuu ka ahaa waxaana kuu cadaynaya siday Ula Dagaalameen Daaquudkii Afweyne iyo weliba Taageeridii ay siiyeen USC si loosii tukhantukheeyo Daalimkaa Afweyne guulna waa laga gaadhey, halkaa waxa sida dhayda uga cadaatey in SSDF aanay daacad ka ahayn dagaal run ah oo lala galo afweyne ilaa ay markii danbe Afweyne toos ula safteen xaga qabiil ahaan umadihii aan daaroodka ahayna dagaal lagu wada qaaday, taariikhdu iyadaa isa saxda ilaa maantana Wixii bay wadaan Munaafaqad iyo Sadbursi laakiin waa lala fahmey si fiican, waxa ssdf Qaawiyey oo umada kusoo jeediyey iney Munaafaqiin yihiin waa ISAAQA waana sababta ay Majeerteen Aadka ugu neceb yihiin Isaaqa.laakiin Isaaqu marwalba way ka digtoon yihiin Munaafaqada MJ, Maantana waataa Somaliland 50 km u jirta GAdhoowe, macnu waxa weeye fidnada ay soo wadaan Halkooda ku horjoogso, Eri Boowe Taariikhda Yaan laga been sheegin oo laga Sibeysan.
1986 ayay SSDF soo xaroodeen,Lana cafiyay,waxana taa u sabab ahaa Garaadkii Dhulbahante Garaad C/Qani oo Siyaad Barre Ku yidhi waar yaad laynaysaa ee la dagaalamaysaa?
Ma tolkaa Daarood qayb kamid ah?
una soo jeediyay inuu cafis u fidiyo Majeerteen,loona dhiso laamiyo iyo dekeda Boosaaso oo dawladii dhacday iyadoo la wado oo dawlada Talyaanigu dhismeheeda waddo.
Ciidankii Ssdf waa soo wada xarooday marka laga reebo hogaankeedii Cabdilaahi Yuusuf oo xabsiga Ku jiray ilaa 1991,kuna soo baxay markii tigreegu Xayla maryam kala wareegeen taladii Itoobiya,siina daayeen dhamaan maxaabiistii Ku jirtay jeelasha dalkaasi.
Dhabayaco abaal ma leh.
Galdogob waxay ka taageen calanka Itobiya
Fool xumo, wadaniyad xumo,khaainul wadanimo ayaa laysugu faanayaa.
Ina adeer waan ka xumahay jawaabta aan lasoo daahay.
Suaashaada ayaa i cajabisey ee ku saabsan ficlida taariikhda gashay ee reer puntland. Anigoo u kala abtirinahayn ayaa ka jawaabin intii tabartay ah.
Waxay suashu ahayd saatan…
“Waa maxay sababta reer puntland, jamac ahaan ama qayb ahaan, u bilaabaan ficil ay gadaal ka qoomameeyaan oo dib dambe ku dhalisa qawmiyada Daarood jab iyo dib u dhac weyn”.
I think this some how has to do with superiority complex and the under estimation of our opposing combatants. I think our egos gets hurts before our body gets hurts and renders our mind irrational.
We have similar mindset as that of the white nations.
But I as a commentor of puntlandtimes, while representing the puntlanders who are brethren to logic, hereby apologise to all the great nation of Darood for all the mishaps and misjudgements and miseries that befallen apon our fellow Darood kinsmens due to puntlanders arrogant and egocentric characteristics.
Surely and most certainly we as majority puntlanders who are brother to logic hereby regreats our past actions and if we could turn the clock back we would not hesitate in a heart beat.
I hope that apology dont fall into a deaf ears.
Wax baad ka ogtahay badanaa sidii taarikhdu u dhacday.
Muhiimadu se waxay tahay sirtii qarsooneyd ee gadal kasoo baxaday.
Layskuma ogayn in somali la kala gooyo oo xabaska qurmuun beri dhulkayaga marti loogu noqdo sida hada taagan.
2. Laskuma ogeyn in dhulweynaha somaaliyeed uu galka cad ee ingiriis ah dhaxal ku yeesho.
3. Layskuma ogayn in 100 sano kadib halgankii xornimo doonku, uu hami ka galo dhulka gaalka ingiriis, oo la yiraahdo kalayoo soo noqo oo na gumeyso.
British Somaliland waa hore ayey bakhtidee joojiya bakhti afuufka Gaalka qarni hore bakhtiyey.
Axsan waxaa inii dhaanta in aad tiraahdaan BUCUR BACAYR ayaa noo
faalooday oo dhulka anagaa leh oo xuduudiisa ayaan soo xiranaynaa.
Axsan taasa la qaataa waayo dhulku waxuu waligiis sii ahaanayaa dhul somaaliyeed oo ma dhaxal habaabayo.